Wararka Maanta: Arbaco, Oct 17, 2012-Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo Maanta Cod Aqlabiyad ah ku ansixiyay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya
Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana fadhiga shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka dalbaday xildhibaanada inay codkooda siiyaan ruuxii ay u arkaan inuu dalka wax ka qaban karo, waxaana fadhiga xaadiray 215 xildhibaan.
"Cod aqlabiyad ah ayaa lagu ansixiyay ra'iisul wasaaraha, codeyntu waxay ahayd mid gacan-taag ah, dhammaan mudanayaashii soo xaadiray kulanka oo tiradoodu ahayd 215 xubnood way ansixiyeen mana jirto mudane diiday iyo mid ka aamusay," ayuu yiri mid ka mid ah mudayaasha baarlamaanka oo HOL la hadlay codeynta kaddib.
Ra'iisul wasaaraha oo ka hadlay kulanka lagu ansixiyay intii aan codka la qaadin ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad ka shaqeysa sugidda ammaanka, horumarinta arrimaha bulshada iyo soo celinta xiriirka Soomaaliya ay la lahayd dalalka caalamka.
"Xukuumadda aan soo dhisi doono waxay ka shaqeyn doonaan sidii ay jiilka soo koraya ee Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen tacliin. Sidoo kale, waxaan ka shaqeyn doonaan sugidda ammaanka iyo kobcinta dhaqaalaha dalka," ereyadan waxay ka mid ahaayeen khudbadii uu ra'iisul wasaaruhu u jeediyay xildhibaannada intii aan loo qaadin codka kalsooni siinta.
Wasiirka koowaad ee dowladda Soomaaliya ma uusan sheegin xilliga uu rasmi ahaan soo bandhigi doono golihiisa wasiirrada, balse wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay noqon doon doonto mid tayo leh oo xoogga saarta siyaasadaha arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna hadal ka jeediyay fadhiga ayaa sheegay inuu ku doortay ra'iisul wasaare Cabdi Saacid inuu yahay nin ay wada-shaqeyn karaan sidoo kalena wax ka bedeli kara xaaladda uu dalku ku sugan yahay.
Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu sidda ugu dhaqsiyaha badan kusoo dhisi doono xukuumadda, waxaana madaxaweynuhu uu intii aan la ansixiyay ra'iisul waasaraha ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka inay codkooda ay siiyaan ra'iisul wasaraha sidii ay isagaba u siiyeen, wuxuuna ballanqaaday inuu si wanaagsan ula shaqeyn doono inta ay kursiga ku fadhiyaan.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha maxkamada Sare Caydiid Cabdullaahi Ilko-xanaf ayaa isla goobta ku dhaariyay ra'iisul wasaaraha cuusb ee Soomaaliya, waxaana guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in wixii maanta ka dambeeya uu ra'iisul wasaaruhu yahay mid sharci ah oo howshiisa gudo-geli kara.
Codadka lagu ansixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ahaa kuwo aqlabiyad ah ayaa waxay noqonayaa kuwii ugu horreeyay oo lagu ansixiyo ra'iisul wasaare soo maray dalka, iyadoo aysan jirin mudane diiday iyo mid ka aamusay cod u qaadidda ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.